आफैंसँग डरायो रेशम फिलिलि - Himalayan Kangaroo
आफैंसँग डरायो रेशम फिलिलि
Posted by Himalayan Kangaroo | २७ चैत्र २०७१, शुक्रबार ०५:४६ |
कहिलेकाहीं आफैंले पाएको सफलता पनि आफैंलाई भारी बन्नुपर्दो रहेछ । प्रदर्शन्मुख चलचित्र रेशम फिलिलिका निर्माण पक्षलाई अहिले यस्तै भएको छ । चलचित्रको पोष्ट प्रोडक्सन नसकिदै यूट्युवमा हालिएको जालमा गीत भाइरल बनिदिएपछि रेशम फिलिलिलाई लिएर दर्शकहरुको अपेक्षा ह्वात्तै बढेपछि चलचित्र निर्माण पक्षका सामू निकै दबाब परेको छ । तर आफ्नो चलचित्र राम्रो बनेको र दर्शकले रुचाइदिनेमा कुनै शंका नरहेको निर्देशक प्रणव जोशी बताउँछन् । यो उनको पहिलो चलचित्र हो ।
संगीतकार कालीप्रसाद बाँस्कोटा र नव गायिका सौम्य बराइलीको आवाज रहेको जालमा गीत यति भाइरल बनेको छ कि यसको दर्जनौं क्यारिकेचर र कभर भर्सनहरु तयार भैसकेका छन् । अचम्मको कुरा त के भने ती सबै भर्सनहरुलाई लाखौं दर्शकले भिजिट गरेका छन् । यस अर्थमा कुल एक करोड भन्दा बढी भिजिटर पाइसकेको छ रेशम फिलिलिको जालमा गीतले । अहिले अपूरो अडियो मात्र सार्वजनिक गरिएको जालमा गीतको भिडियो र यसको अर्को अन्तरा कस्तो होला ? सबैको चासो र तीव्र प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । तर निकै चतुर पोलिसी अपनाउँदै आएको रेशम फिलिलि यूनिटले गीत भाइरल भएपछि रिसुट गरेर भिडियो राम्रो बनाएको दाबी त गरेका छन् नै तर फिल्म चल्नु अगाडि भिडियो भने रिलिज नगर्ने रणनीति बनाएको छ । अर्थात यो गीतको भिडियो हेर्न चाहनेले पिल्म हेर्न हलसम्म नै जानुपर्ने भएको छ ।
यो पोलिसीलाई कतिले आफ्नै चलचित्रप्रति अविश्वास भएको भनेर निर्माण पक्षको आलोचना पनि गर्न थालेका छन् । तर अहिले बजारको मनोविज्ञानलाई आधार बनाउँदा रेशम फिलिलिले दर्शकलाई इनिशियल चरणमा हलसम्म तान्ने निश्चित छ ।
वैशाख ११ गते रिलिज हुने रेशम फिलिलिमा विनय श्रेष्ठ र मोनिका प्रधान मूख्य भूमिकामा छन् ।
Previousएसएसपी रमेश खरेल पनि अनियमिततामा संलग्न
Nextबन्ला त नेपाल करोडौंको स्वर्ग ?
बलिउड अभिनेत्री दीयाले बाँधिन् लगनगाँठो
३ कार्तिक २०७१, सोमबार ०८:५५
नायिका सुष्मा कार्कीद्धारा पत्रकारमाथि आक्रमण !
१२ श्रावण २०७३, बुधबार ०२:१९
नायिका पूजा शर्मालाई गायक सुगम पोखरेलसँग डर !
३० जेष्ठ २०७४, मंगलवार ०३:२९